Torohevitra azo antoka efa tonga amin'ny tranga vaovao 'Mistery tsy voavaha'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Torohevitra azo antoka efa tonga amin'ny tranga vaovao 'Mistery tsy voavaha'
by Timothy Rawles Jolay 7, 2020
nosoratan'i Timothy Rawles Jolay 7, 2020
Ny fanavaozana ny Netflix vao haingana an'ny Mistery tsy voafehy dia namoaka taranaka vaovao ho an'ny mpijery, ary araka ny Nerdist fitarihana mahaliana dia efa nanomboka nirotsaka.
Ireo loharanom-baovao USA Today ary mitatitra izany Torohevitra 20 azo itokisana efa natolotra ny manam-pahefana tamin'ny alàlan'ny Hotline Unsolved.com.
Ho an'ireo izay mila fanidiana ny raharaha Rey Rivera amin'ny fizarana voalohany, vaovao tsara, vaovao vaovao no natolotra manoloana an'io mistery io.
Ny fatin'i Rivera dia hita tao amin'ny efitrano malalaky ny kaonferansa Hotely Baltimore be olona tamin'ny 2006. Toa nitsambikina avy teo ambony tampon-trano izy ary namaky ny valindrihana. Ny olana fotsiny dia tsy azon'ny mpanao famotorana atao hoe ahoana no nahaizany nitsambikina sy tonga tany amin'ny toerana nalehany satria tsy azo atao izany lojika izany. Plus tsy nisy fakan-tsary iray nisambotra an'i Rivera niditra tao amin'ilay trano. Ampio izany amin'ny maha-mpivady vao sy faly ny hanangana fianakaviana, ny fahafatesany tamin'ny famonoana tena miharihary dia maro no manontany tena hoe inona marina no nitranga.
Nisy tendro hafa koa tonga ho an'i Alonzo Brooks ilay mainty hoditra izay vatana efa ho simba no hitan'ny renirano iray volana iray taorian'ny nanjavonany. Ny sasany mihevitra fa fanarontsaronana ny mpanao heloka bevava fankahalana izany.
tany am-boalohany Mistery tsy voafehy izay nihazakazaka nandritra ny vanim-potoana 15 dia nanampy tamin'ny famahana tranga mangatsiaka maro ary nosokafana indray. Ny antsasaky ny mistery 1,300 XNUMX nasongadina tamin'ny andiany voalohany dia voavaha.
Ny famerenan'i Netflix dia mikasa ny hamoaka fizarana bebe kokoa amin'ny faran'ity taona ity. Ara-tantara dia nanome fanavaozana ireo tranga teo aloha izay nasongadin'izy ireo ilay seho.
Raha manana fampahalalana momba ny tranga vaovao asongadina ao amin'ny andian-dahatsoratra Netflix ianao Unsolved.com ary manampy amin'ny famahana ny mistery.
Sary lohateny: Kathleen Jones
Mistery tsy voafehy
Elisabeth Moss dia hilalao ao amin'ny 'Candy' an'ny UCP miorina amin'ny Real Life Texas Killer
Dan Aykroyd dia mampindrana Ghostbusting amin'ny Travel Hotel's 'Hotel Paranormal'
'Wolf Creek 3' nalaina avy amin'ny Film Altitude ...
Browse Cateories Select Category Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (9) AppleTV + (4) Blu Rays (5) Horohoro amin'ny hatsikana (46) Tantara an-tsary (13) Facebook (andiany) (1) Angano (39) Rakitra hita (28) Gore (24) HBO (sarimihetsika) (5) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (54) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,650) Sarimihetsika mahatsiravina (237) Horror Series (62) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (4) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (35) Resadresaka nifanaovana (andiany) (2) Horohoro LGBTQ (38) Lisitry (sarimihetsika) (38) Lisitry (andiany) (2) Tsena (19) Monster Horror (9) Hevitra momba ny sarimihetsika (48) Sarimihetsika (14) Mozika (35) Netflix (sarimihetsika) (21) Netflix (andiany) (25) Tsy angano (4) Paranormal (75) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (52) Famerenana andian-dahatsoratra (8) Shudder (sarimihetsika) (44) Shudder (andiany) (15) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (35) Sarimihetsika mivantana (65) Streaming Series (25) Kilalao (2) Tranofiara (sarimihetsika) (194) Tranofiara (andiany) (37) Heloka tena izy (43) Lalao video (178) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (11)